I-Cosy 💥Intofontofo eqhelekileyo💥neGumbi lomntu wonke! - I-Airbnb
I-Cosy 💥Intofontofo eqhelekileyo💥neGumbi lomntu wonke!
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguEdna
Yiza uzonwabele ii-S'mores ngomlilo! I-Crane Cottage yenzelwe intuthuzelo, ulonwabo kunye nobumfihlo! Umgangatho wokhuni olunzima, ifanitshala egudileyo, indawo yomlilo yendawo kunye neetoni zezinto eziluncedo! Zonke zibekwe ngaphantsi kwe-1 yeemayile ukufikelela kwiLake Tenkiller! Inkonzo epheleleyo yokutyela kunye neVenkile eLungileyo w/Deli kumnyango olandelayo! Isitishi sase Oklahoma/Ikhaya leJuicy Pigg BBQ 2 miles away, Big Reds Restaurant 4 miles. Imizuzu eli-12 ukuya eTahlequah, kwikhaya loKhenketho lweSizwe saseCherokee! USam & Ellas Pizza/Cantino Bravo, & neevenkile ezimnandi zasekhaya
Ikhaya linekhitshi eligcwele ngokupheleleyo kunye nazo zonke iimbiza / iipani / iipleyiti / izitya / njalo njalo oya kuzifuna. IMicrowave Popcorn ibonelelwe, ikhithi yefondue, umenzi wewaffle nokunye okuninzi!
Ibhedi, iitawuli kunye neshampoo esisiseko/ukuhlamba umzimba kunikezelwe.
I-Smart TV, iKuerig iMenzi yeKofu, iiglasi zeWayini, iCork Screw, iDraft yeglasi zeBeer & nokunye okuninzi!
Idesika entle enendawo yokuhlala, iGrill yeGesi, itafile yePikiniki kunye nemithi emikhulu yomthunzi!
Indawo yokubeka umlilo kwiyadi yangasemva eneenkuni, kunye neenkuni zokuqhotsa into oyithandayo!
4.95 · Izimvo eziyi-169
ILake Tenkiller ifanelekile ukonwabela nje ukutshona kwelanga eCherokee Landing State Park (ngaphantsi kweemayile ezi-2), ipiknikhi, iindawo zokudlala ezingqiniweyo, iirempu zamaphenyane, ukukhwela isikhephe, ukuloba, ukukhwela inqanawa kunye nokuqubha konke kuvumelekile! IiMarina ezininzi ezigqwesileyo ezineendawo zokutyela kunye neendlela zokuzonwabisa ezonwabileyo zonke ngeemayile ezili-15.
Cookson Bend Marina, Sixshooters Marina, njl...
Umbuki zindwendwe ngu- Edna
Iya kufumaneka kuyo nayiphi na imibuzo / iinkxalabo